McCain: Shiilan Faransiiska ugu fiican wuxuu u baahan yahay alaabta ceeriin ee ugu fiican. Oo waxaan qorsheyneynaa inaan ku korno Ruushka - Majaladda Nidaamka Baradhada
Shirkad McCain waxaa aasaasay walaalaha McCain ee Kanada 1957kii. Saldhigga shaqadeedu waxay ahayd qoraal fudud - ganacsiga wanaagsan wuxuu ka bilaabmaa heerarka anshaxa saxda ah. Mabda'ani wuxuu ahaanayaa halbeegga aasaasiga ah ee Siyaasadda Mas'uuliyadda Shirkad ee Shirkadda, oo hal-ku-dhiggeedu noqday weedha: Wanaagsanow. wanaag samee! (Ahow kan ugu wanaagsan, wax wanaagsan samee!).
In kasta oo ay tahay dabeecadda ganacsi ee shaqada shirkadda, afar mabda'a ayaa ah mudnaanta ay leedahay: badbaadada, ixtiraamka, furfurnaanta iyo isku halaynta.
Si aad u taariikhda, McCain waa soo saaraha ugu wayn aduunka ee soo saara badeecooyinka baradhada barafaysan. Shirkaddu waxay maamushaa 51 warshadood waxayna ka hawlgashaa 160 waddan.
Shirkad McCain wuxuu leeyahay 60 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan warshadaha baradhada, laakiin isla mar ahaantaana si joogto ah u dadaala horumarinta iyo ka fekeraya mustaqbalka - cilmi-baaris ku saabsan hababka cusub ee beeraha, ka shaqeeya ilaalinta ciidda iyo ilaalinta qoyaanka, samaynta beerashada baradho jawi- waara iyo ecology.
McCain Waxay si dhow ula shaqeysaa la-hawlgalayaasheeda beeralayda kuwaas oo baradhada siiya dhirta shirkadda, sababtoo ah soosaarka shiilan ee Faransiiska wuxuu ka bilaabmaa beer baradho ah.
Shirkad kasta oo beeralayda ah waxa kormeera shaqaale gaar ah McCain. Khabiirada shirkadu waxay fuliyaan taageerada buuxda ee mashruuca waxayna bixiyaan talooyin loogu talagalay kordhinta wax-soo-saarka, hagaajinta tayada baradhada, iyo sidoo kale kordhinta nolosha shelf ee alaabta. Shirkadda iyo la-hawlgalayaasheeda beeralayda waxay ku midaysan yihiin hadaf guud - si ay u helaan baradhada ugu fiican, maadaama kaliya alaabta ceeriin ah waxaad samayn kartaa fries french ugu fiican adduunka!
Isku xirka wada-hawlgalayaasha beeraha McCain waxaa ku jira in ka badan 3500 beeralay iyo ganacsiyo beeralay ah oo aduunka oo dhan ah. Shirkaddu waxay doonaysaa inay la dhisto xidhiidh muddo dheer ah iyaga - Ameerika iyo Yurub waxaa jira qoysas beeralay ah kuwaas oo beerashada alaabta ceeriin McCain ku hawlan jiilkii saddexaad ee beeralayda.
McCain waa meherad qoys, la-hawlgalayaasha shirkaduna waxay ka mid noqonayaan qoyskan weyn ee beeralayda. Ma rabtaa inaad ku biirto?
La shaqaynta McCain, waxaad heli doontaa noocyada gaarka ah ee shirkadda, aqoonta beeraha ee ugu dambeeyay; waayo-aragnimo muhiim ah ka heshid taageerada xirfadlayaasha waxaad ku gaari doontaa natiijo aad u fiican.
Mustaqbalka dhow shirkadda McCain waxay qorsheyneysaa in ay degaan wax soo saarkeeda ee Ruushka oo ay ballaariso iskaashiga beeraha iyo shirkadaha beeraha. Ruushka McCain matalaan: qaybta qaybinta McCain Suuqgeynta (Rus) LLC, Waaxda Beeraha ee McCain Agriculture (Rus) LLC, iyo sidoo kale McCain Foods Rus LLC, kaas oo fulinaya mashruuca dhismaha dhirta ee gobolka Tula.
Matalaadda shirkadda McCain Ruushka
105082, Moscow, St. Malaya Pochtovaya, 12, dhisme 1
Tel. +7 (495) 974 23 19
Maareeyaha iibka alaabta ceeriin Rinat Khantseverov: + 7 910 076 82 26
McCain goobta dhismaha
301637, gobolka Tula, degmada Uzlovsky, tuulada Ogarevka, Aagga Dhaqaalaha Gaarka ah "Uzlovaya"
Tags: McCainWax soo saarka shiilan ee Faransiiska
ShareShare48Share35Si aad u soo diri
Ganacsiga gobolka Vitebsk (Belarus) - Tolochin cannery - ayaa dhowaan u dirtay dufcaddii ugu horreysay ee shiilan Faransiis ah Kazakhstan, ayaa sheegaysa macluumaadka iyo falanqaynta ...
Shiilan faransiis ah ayaa gabaabsi ku ah Jarmalka
Sababta keentay yaraanta shiilan Faransiiska ee makhaayadaha Jarmalka ayaa ah yaraanta saliidda gabbaldayaha ee dalkaas, taas oo ka dhalatay ku xadgudubka silsiladaha sahayda ...
PepsiCo waxay dhisi doontaa warshad cunto fudud oo gaaraya 12 bilyan oo rubles
Gobolka Nizhny Novgorod ayaa kordhay dhoofinta wax soo saarka beeraha 18%